Vaovao - Aza mahatakatra ny famantarana fanasan-damba, manasa lamba lasa akanjo simba
Aza mahatakatra ny famantarana ny fanasana, ny fanasana lamba lasa akanjo simba
Niseho tamin'ny mari-pamantarana akanjo nandritra ny efa-polo taona izy ireo, tsirairay avy nofinidin'ny manam-pahaizana iraisam-pirenena noho ny fahatsorany sy ny fahazavany.
Saingy ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny torolàlana momba ny fanasana dia mety hosoratana amin'ny teny martiana.
Araka ny fitsapan-kevitra vaovao, olona sivy amin'ny 10 no tsy mahay mamantatra ireo marika iraisana ampiasaina amin'ny marika amin'ny akanjo. Na ireo nahay ny tsy fitovian'ny volon'ondry sy ny synthetika aza dia miaiky fa gaga noho ny karazan'ireo boaty, boribory ary hazo fijaliana izay manome torohevitra momba ny fanamainana sy ny fanamainana.
Ny valim-pikarohana dia avy amin'ny fitsapan-kevitr'ireo olona 2.000 notontosain'ny YouGov ho an'i Morphy Richards. Ny ampahatelon'ny olona nanaovana fanadihadiana dia nilaza fa tsy misy fantany ny iray amin'ireo marika enina aseho, raha ny marika tokana eken'ny olona mihoatra ny antsasaky ny olona dia ny vy misy teboka tokana. Manodidina ny 70 isan-jato no mahalala fa midika hoe "vy amin'ny hafanana ambany". Famantarana 10 isan-jato monja no nahalala ilay famantarana hoe "aza malaina madio", raha 12 isanjato ihany no mahalala ny "drip dry only".
Na eo aza ny revolisiona ara-pananahana dia mbola manam-pahalalana bebe kokoa noho ny lehilahy ny vehivavy. Ny fahatsiarovan-tena no avo indrindra teo amin'ireo vehivavy 18 ka hatramin'ny 29 taona - izay mazava fa manan-danja tokoa ny fikarakarana akanjo.
Chris Lever, avy ao amin'ny Morphy Richards, dia nilaza hoe: "Ny tandindon'ny Clothes Care dia fiteny tokana, mazava ho azy fa olona vitsy any Angletera no naka fotoana hianarana. “
"Ny fianarana ireo fotokevitra toy ny sary famantarana izay maneho ny fanamainana maina sy ny maneho ny fanasan-damba mahazatra dia mety hahomby amin'ny akanjo tsara indrindra."
Nilaza ny filankevitry ny mpanolotsaina momba ny fanadiovana trano fa tsy nahagaga raha nahafantatra fa tsy mahalala azy ireo ny olona.
"Mandiso fanantenana ny tsy fisian'ny fankatoavana, fa tantara miverimberina hatrany izany", hoy ny mpitondra teniny, Adam Mansell. “Fikambanana kely izahay ary tsy manana teti-bola lehibe.”